Ego site na bedbugs n'ụlọ: ihe ndị nje na-atụ egwu, mma ha nsi na ulo na ụlọ - Ụlọ, ụlọ - 2020
Ngwọrọgwu dị mma maka bedbugs n'ụlọ: esi ewepụ ụmụ ahụhụ na ulo, uru na ọghọm nke dị iche iche chemicals
Ọdịdị nke bedbugs na ulo (linen ma ọ bụ ihe ndina) - a pụtarakarị ihe. Echela na ihe kpatara ya bụ adịghị ọcha ma ọ bụ ọnọdụ dị ala.
Ha anaghị eche banyere ego ị na-enweta, ha na-amịpụta nke ọma ma n'ụlọ "dysfunctional" na n'ụlọ ndị ejizi euro. Obere nje nwere ike ịbanye n'ime ụlọ na arịa, akwa akwa, uwe, na-agbaga ndị agbata obi ha, ma ọ bụ na ị nwere ike ịme ha njem ahụ.
Enwere nnukwu ihe mgbochi nke bedbugs n'ụlọ, naanị ị ga-ahọrọ nhọrọ kacha mma.
Ngwurugwu na mmiri
Ngwọrọgwu ndi mmadu
Kedu ka esi tufuo bedbugs n'ụlọ?
Echela na usoro nke ịkwatu bedbugs n'ime ụlọ dị mfe. A ghaghị ịghọta na ọ bụrụ na ị na-eme disinfection na-ezighị ezi, nje ndị ahụ nwere ike ịme ngwa ngwa maka ihe eji eme ihe ma nọgide na-ebi n'akụkụ onye ọzọ.
Tụkwasị na nke ahụ, ọ dịghị otu ngwọta ọ bụla dị otu narị percent nke nwere ike ịzọpụta gị site na ndị agbata obi na-adịghị mma ozugbo.
Kedu ihe ị na-ajụ? Iji malite mgba, na-eche na ihe ịga nke ọma nke ihe omume a ga-adabere n'otú nnukwu ógbè nke ụmụ ahụhụ si dị ukwuu, ihe ị na-eme atụmatụ iji ya na otú nlezianya ga-esi agwọ ọrịa ahụ.
Ya mere, omume ndị ahụ kwesịrị ịbụ ndị a::
Ị ga-ekpebiri n'onwe gị ma ị ga-ịsacha ọrịa ma ọ bụ chọọ enyemaka site na ọkachamara.
Họrọ usoro ma pụtara: kemgwucha mmadụ ma ọ bụ pụrụ iche.
Gbaa mbọ hụ na nchekwa zuru oke ma jiri mgbanaka, mgbanaka, ihe nkpuchi, respirator.
Hapụ ụlọ ndị mmadụ na anu ulo.
Soro ntuziaka maka iji ngwá ọrụ ahọrọ.
Na-elezi ebe nile nke ebe obibi ga-ekwe omume maka bedbugs nke ọma.
A ga-akwụ ụgwọ nlebara anya:
arịa ụlọ (upholstery na etiti folds);
ihe mgbawa n'okpuru ebe ndị a na-ebipụta ihe;
ngwongwo na nkọwa nke ihe ndina;
azụ ụlọ ngwá ụlọ.
Ọ bụghị naanị ụmụ ahụhụ nwere ike ịnapụta mmadụ oge na-adịghị mma.
Na saịtị anyị, ị ga-ahụ ọtụtụ ihe ndị bara uru banyere ụdị nri ndị dị otú ahụ dị ka fleas, mwepụ na ndanda.
Ma ugbu a, ka anyị lebakwuo anya na ndị mmadụ na ngwá ọrụ pụrụ iche nke ụlọ ọrụ nwere ike ijikwa ịchịkwa bedbugs n'ụlọ.
N'ikpeazụ, a na-ekewa akpụkpọ anụ (pencils insecticidal) site na bugs abụọ:
Ngwa Ha na-etinye na nsị paraffin na mgbakwunye ndị ọzọ.
Chalky. Ha na-adabere na nzu ma ọ bụ gypsum.
Dị ka onye na-arụsi ọrụ ike na-ejikarị pyrethroid na-egbu egbu. Ebe ọ bụ na ahụhụ ahụ na-agafe ngwa ngwa na ngwa ngwa, na-agafe eriri nke obere nsi ahụ, ọ bụghị nanị nsị ya, kama ọ na-ewetakwa ndị mmadụ ọnụ.
Ihe ọ na-eme bụ iji gbochie usoro dị mkpa nke na-erute n'ahụ anụ ahụhụ: ntinye ọbara, mgbaze, wdg.
Ka ọgwụ wee nwee ike ibibi ha, ịkpọtụrụ ụmụ ahụhụ ahụ na ọgwụ ahụ dị mkpa.
siri ike iru ebe na etiti;
Mmetụta nke ọgwụ eji eme ihe bụ ihe dị ka 7-10 ụbọchị.
Njirimara na - enweghị oke - na - abụkarị "ndozi" n'ime ngwá ụlọ, n'okpuru akwụkwọ anwụrụ akwụkwọ, na desktọọpụ, wdg. Mkpịsị na-enweghị ike ịbanye n'ime ya nke ukwuu.
Enweghị mmetụta ọ bụla ozugbo.
Mbadamba osisi na-eme ka ihe na-arụ ọrụ.
Na bedbugs enweghị ike ịlụ ọgụ, jiri ọtụtụ ngwaọrụ nwere ihe dị iche iche na otu oge ahụ.
Ọzọ na tebụl i nwere ike ịhụ ihe ndị e ji mara crayons site na nkịta ndị dị na ahịa Russia:
Aha Atụmatụ Ahịa
Ihe na-eme ihe bụ alpha-cypermethrin.
Acha anwụrụ na-acha uhie uhie.
Otu ngwugwu zuru oke mita 20.
Tinye na ọnyá dị iche iche ruo 4 cm.
Na-arụsi ọrụ ike maka izu ise, emesịa mmetụta ahụ belata.
Tinye na mgbidi ka ọ dị elu karịa 1 m.
site na rubles 50
Deltamethyrin na zeta-cypermethrin - ihe na-eme ka ibe ha dịkwuo mma.
Ọ nwere mmetụta siri ike na-adịghị mma.
Ndị na-emepụta ihe na-ekpuchi n'okpuru mmetụta nke ultraviolet.
O nwere mmetụta dị ogologo oge na-adịgide adịgide site na enyemaka ndị enyemaka.
Mgbochi anaghị achọ ka oyi akwa karịa 1 cm.
site na rubles 70
Ihe na-arụsi ọrụ ike bụ deltamethrin.
Nkwakọ ngwaahịa zuru ezu maka mita 30 square.
Na-eguzogide ìhè UV.
Nwere nke abụọ nke toxicity.
Mgbe e jiri ya mee ihe, aka ga-asacha ya nke ọma ma jiri ya na ụmụ anụmanụ na ebe obibi.
site na 150 rubles
Ihe na-arụsi ọrụ ike bụ fipronil na cypermethrin.
Ọ na-egbu egbu ụmụ mmadụ.
UV na-eguzogide ọgwụ.
Ogologo oge owuwe ihe fọdụrụ - banyere ọnwa 2.
site na rubles 20
Ngwado ihe ike - cypermethrin.
Ọ nwere mmetụta siri ike nke neuroparalytic.
Ụzọ mgbochi ga-ezu oke.
Otu mkpọ dị oke mita 40.
Nhazi nhazi dị mkpa, ma ọ bụghị tupu karịa ụbọchị 60.
site na 100 rubles
Mmiri mmiri na sprays kasị ewu ewu n'etiti ndị na-azụ ahịa. Ọ bụghị ihe ijuanya, n'ihi na ọ bụ ụzọ kachasị mma n'etiti ngwaahịa ndị ahụ gwụrụ ma dị irè.
Ozugbo ekwesiri ighota na enwere uzo di iche n'etiti uzo na uzo.
Ịgba - nke a bụ mmiri mmiri nke dị mkpa ka a ghagbuo ya na mmiri tupu o jiri ya, wụsara ya na pulvelinator wee tinyezie ya. Ọtụtụ mgbe ụdị nsi a na-eji ndị ọkachamara na-arụ ọrụ, ebe ọ bụ na eji ha achọ ezigbo nchebe.
Aerosol - enweelarịrị ihe na-atụgharị uche ya, jupụta na akpa pụrụ iche na njikere iji ya. Ọ bụ obere ihe na-emerụ ụmụ mmadụ n'ihi na ọ na-enwe njedebe dị ala nke ihe na-arụ ọrụ.
Kedu ka esi mezuo mgbe ị na-etinye sprays na aerosols? Chemicals na-abanye n'ahụ ụmụ ahụhụ na ụzọ abụọ.:
Site na ihe mkpuchi na ihe dị nro.
Ihe kachasị njọ na-akpata site n'ịkụnye ihe ngwa ngwa banyere ihe oriri na n'ime awa 3 mgbe a gwụchara ya.
Ibe ahụ enweghị ike ịzụlite ọgụ na-adịghị echekwa mgbe ị na-agbanye ego!
Ya mere, n'etiti uru nke ụmụ ahụhụ ndị a nwere ike ịmata:
nchebe dị oke ala maka ndị mmadụ na anụ ụlọ.
Ọzọ na tebụl i nwere ike ịhụ ihe bụ isi e ji mara ihe kachasị ewu ewu na ahịa Russia:
Ngwado ihe omimi - cypermethrin na tetramethrin.
Otu n'ime ọgwụ ndị Russia kachasị dị irè.
Ha ahapụghị akara ma ghara ịkwata akwa na ngwá ụlọ.
Enwere uzo di iche iche, tinyere ihe di mkpa maka uzo na oghere di omimi.
Na-ebibi naanị ndị okenye na anaghị emetụta nsen.
Ndị na-arụsi ọrụ ike n'ime awa 2 mbụ na enweghị akwụkwọ.
site na 220 rubles maka 400 ml
Cypermethrin + tetramethrin. +
Otu cylinder zuru ezu maka mita 50 square.
Kasị arụ ọrụ n'ime awa abụọ mbụ.
Agaghị ahapụ akara na isi na-apụ n'anya ngwa ngwa.
Ọ dị mma nke ọma ma nwee ike ibibi ndị iro maka ọgwụgwọ abụọ kpamkpam.
site na 320 rubles maka 225 ml.
Ọ na-enwe mmetụta dị irè na ụkpụrụ nke mmeghachi omume olu.
Ihe na-arụsi ọrụ ike na-emetụta 15 ụbọchị ọzọ mgbe ọgwụgwọ gasịrị.
A ghaghị ịsacha ebe dị mma dị ka ụdị ihe nkiri.
Nke kachasị dị irè maka ọrịa ndị na-abụghị ndị siri ike, n'ụwa nile.
site na 250 rubles maka 300 ml.
Ihe na-eme ihe bụ permethrin, tetramethrin na cypermethrin.
A na-eji ndị na-arụ ọrụ disinsectors.
Mmetụta na-emetụta ya ruo ụbọchị 60.
Achọrọ nchedo, otu ọgwụgwọ zuru oke.
site na 450 rubles maka 250 ml
Ihe na-arụsi ọrụ ike bụ malathion.
Na-arụ ọrụ 2 awa mgbe ọ nwụsịrị ma nwee mmetụta dị mkpụmkpụ.
Ọ na-arụ ọrụ na kọntaktị na adịghị enye ezi mmetụta na nnukwu mmadụ.
Doo ọ bụla fọdụrụ na flavored.
Ọ bụ ihe na-adịghị agwụ agwụ nye ultraviolet na ngwa ngwa ọ na-efunahụ ya.
site na 100 rubles maka 300 ml.
Ihe na-eme ihe bụ dimethyl-dichlorovinyl phosphate na mgbakwunye nke cypermethrin.
Ngwurugwu a maara ma gosipụta ya na ihe mejupụtara ya.
Ọ na-esi ísì, nọgidere na-enwe ụtọ.
Enweghi mmetụta ọhụụ doro anya.
A chọrọ nhazi.
site na 80 rubles maka 190 ml.
Ihe na-arụ ọrụ bụ cyphenothrin na imiprotrin.
Otu cylinder zuru ezu maka mita 70 square. mita
O nwere ihe nchedo 3 ma kwadoro ya na Ministry of Health.
O nwere ihe nhicha na-agbanwe agbanwe maka ịkụnye ya na oghere.
site na 500 rubles maka 400 ml.
Ihe na-eme ihe bụ cypermethrin, tetramethrin na synergist.
Enweghị isi ísì ụtọ.
Ọ nwere mmetụta ozugbo, mgbe minit 15 gasịrị, ọ ga-ekwe omume ikuku ụlọ ahụ.
Site na mmalite ọ bara uru na-ekwu na iji mmiri ọgwụ mmiri eme ihe bụ ụzọ dị irè iji kpochapụ bedbugs otu ugboro. Ndị a bụ ihe ngwọta ndị ọkachamara na-eji n'ọrụ ha.
A na-ekewapụta ihe ndị mmiri n'ime abụọ.:
Suspensions na microcapsules.
Ụdị nke mbụ na-etinye uche na mmiri. Uzo nke ato gunyere microcapsules na ihe ogwu aru, nke ndi ozo na eme ka ngwá ọrụ a di irè. A na-agbanyekwa mmiri na mmiri ma mesoo ha ebe obibi rụrụ arụ.
Tupu ị na-eji ụdị ọgwụ ọjọọ a, jide n'aka na akwụkwọ nwere ike ịnweta, chọpụta ihe dị ize ndụ nye ụmụ mmadụ ma jiri nlezianya gụọ ntụziaka ahụ.
Ọzọ na tebụl i nwere ike ịmatakwu àgwà nke isi mmiri ọgwụ maka bedbugs na Russia ahịa:
Ihe na-eme ihe bụ chlorpyrifos.
Mgbu dị ala.
Hapụ ọ bụla fọdụrụ na enweghị isi.
Ihe mejupụtara nwere microcapsules nke na-eme ka oge ntanetị dị ogologo ruo ọnwa isii.
Enwere ike iji maka mgbochi.
site na 700 rubles kwa 100 ml
Nwere microcapsules nke na-eme ka mmetụta ahụ dịkwuo mma.
Nchekwa maka ụmụ anụmanụ.
Economics, site na 50 ml nke 10 lita nke ihe ngwọta.
Nri na-esi ísì na-apụ n'anya n'ime awa atọ.
site na 750 rubles kwa 100 ml.
Ihe mgwa ihe na-arụ ọrụ bụ fenthion.
Dị irè, na-ebibi ụmụ ahụhụ n'oge kachasị oke.
Ọrịa dị elu. Mgbe ọgwụgwọ gasịrị, hapụ ụlọ ahụ maka otu ụbọchị, jiri ngwá nchebe.
Ọ na-esi ísì ụtọ ma dị njọ.
Economics 5 ml kwa 1 liter mmiri.
Na-arụsi ọrụ ike maka ihe karịrị ụbọchị 15 ma bibie ọ bụghị naanị ndị okenye, kamakwa nsen.
site na 220 rubles maka 50 ml.
Ngwado ihe omimi - Lambda-cygalothrin.
Dị irè, ihe mbụ si na ụbọchị ise.
Mmetụta na-arụ ọrụ ruo ọnwa isii.
Enweghị isi, ọ dịghị onye fọdụrụnụ.
site na 700 rubles maka 50 ml
Ihe na-eme ihe bụ flapyrifos.
Economics: 5 ml kwa 1 liter mmiri.
Onu ogugu 4.
Agaghị ahapụ akara ma ọ nweghị isi ísì.
Mmetụta dị mma 60 ụbọchị.
site na 500 rubles maka 30 ml.
Na-eguzogide ultraviolet, akwa na obere okpomọkụ.
Mmetụta dị mma bụ ihe dịka ọnwa atọ.
site na 350 rubles maka 50 ml.
Emeputa ma gosipụta, ọnụ.
Mgbu na-egbuke egbuke, chọrọ nchebe na airing.
Ọ nwere isi ísì.
site na 600 rubles maka 120 ml.
Ihe jikọrọ ya na chlorpyrifos, cypermethrin, tetramethrin.
Ọdachi dị ala, ma chọrọ ọgwụgwọ.
Arụ ọrụ maka ụbọchị 15.
Agaghị ahapụ akara ma ghara ịnụ ísì.
Iji ya mee ihe ugboro ugboro na-eduga ná mmepụta nke ọgụ.
site na 800 rubles kwa 100 ml.
Akwukwo ndi ozo bu ihe ndi ozo di na ahia. Ma ha ka na-ewu ewu. Ihe mere ha ji dị irè, n'ihi na ahụhụ bụ ọbara na-aṅụ ọbara, nke pụtara na ị nwere ike ikpochapụ ha naanị site n'enyemaka nke ihe ndị na-akpọtụrụ. Ozugbo ugbo ahụ "dakwasịrị" na ntụ, ọ na-amalite ọrụ ya, gbakwunyere mmetụta ndị na-egbu mmadụ nye ndị ọzọ, n'ihi na nkịta na-ebi na ikpo okwu.
Isi uru nke bedders:
Nnweta Na-ere ọ bụla akụ na ụba ma na-efu.
Abụọ eji. I nwere ike iji uzuzu dozie ihe ngwọta.
Ogologo oge. Nsi ahụ nọgidere na-enwe ihe onwunwe ya ruo ogologo oge ma otu ọgwụgwọ na-abụkarị iji bibie mmadụ dum.
E nwere ike ịchọta ihe ndị mejọrọ:
Ọkwa dị irè. Maka nsi ime ihe, ọ ghaghị ịdaba na mkpịsị ahụhụ ụmụ ahụhụ ahụ.
Ọ bụghị nnọọ adaba iji. Uzuzu ga-anọgide n'ime ụlọ maka ụbọchị ole na ole, nke anaghị adịrị ndị mmadụ mfe ma dị ize ndụ maka ụmụ anụmanụ.
A choro nchedo. Inhalation nke ntụ ntụ nwere ike ime ka nsị.
Tebụl dị n'okpuru ebe a na-enye ihe ndị bụ isi e ji emebe ihe oriri bedbug na ahịa Russia:
Ngwado ihe omimi bu acetamiprid.
Nzuzu na-enweghị ezigbo nkọ.
Ọ ka mma iji ụdị ngwọta.
Mmetụta dị na 1-2 awa.
Nri 100 ml kwa 1 square mita.
Ọnwụ ahụ dị ala, ma achọrọ nchebe.
site na 1500 rubles kwa 250 grams
Ihe na-eme ihe bụ dimethyl.
Mgbu siri ike, dị ize ndụ nye ụmụ mmadụ na ụmụ anụmanụ.
Inye ego iji kwado ihe ngwọta - 10-15 gr. na 1 liter mmiri, ihe oriri oriri - 100-150 ml kwa 1 sq.m.
Mmetụta ya na-abịa ngwa ngwa, mana achọrọ ọgwụgwọ.
site na 1000 rubles kwa 1 n'arọ.
Ọ nwere mmetụta dịgasị iche iche.
Nkwusioru a na-atụgharị na ọnụego 4-10gr kwa liter mmiri. Ọ bụ ezuru 10-15 sq.m. nhazi.
site na 1,700 rubles kwa 1 n'arọ.
Dị nnọọ irè, mebie bedbugs kpamkpam.
10 grams kwa liter nke mmiri, ihe ngwọta na-ere ihe dị ka 100 ml kwa square mita.
site na 1400 rubles kwa 1 n'arọ.
Echefula na e nwere ọtụtụ ụzọ ndị mmadụ si ewepụ ihe bedbugs n'ụlọ ahụ.
Lee ụfọdụ n'ime ha.:
mmiri esi mmiri;
okpomọkụ dị ala;
dị ka ihe atụ, wormwood;
Ka anyị nyochaa ụfọdụ n'ime ha.
Mmiri dị egwu nke dị ike - Nke a bụ usoro nke usoro nchịkọta pesti. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ibibi akwu ma ọ bụ belata ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ.
Jiri ihe ndi siri ike (wormwood, mmanya, tansy) - ha nwere ike iwepụ ụmụ ahụhụ ruo oge ụfọdụ karịa igbu ha. Gbasaa ahịhịa ndụ gburugburu akwa, ma n'ụtụtụ na-eme ihe dị irè karị.
Oke na ala. Ee, n'agbanyeghị ezi mgbanwe ya, ahụhụ ahụ nwere adịghị ike ha. Ma ... ha anaghị adị ndụ nanị ogo 40 na okpomọkụ na iri abụọ na abụọ Celsius. Dịka ọmụmaatụ, ihe mgbochi, linen na sofa, ị nwere ike wepụ na ntu oyi 20, ma jupụta mmiri n'akụkụ mmiri. Mana 100% kwere na mmadụ nile nwụrụ n'ime ụlọ ahụ.
Ọfọn, ihe ngwọta ole na ole dị na nchịkọta dị mma site na ntụgharị ụzọ.
Ntụziaka nọmba 1:
300 grams nke ncha mmiri;
80 ml mmiri;
20 ml nke turpentine;
20 ml nke kerosene.
Ntụziaka nọmba 2:
300 ml nke manu oku;
250 ml nke turpentine;
75 grams nke naphthalene.
Ntụziaka nọmba 3:
15 ml nke amonia;
50 ml nke benzene;
15 ml nke turpentine;
150 ml mmanya na-abaghị uru.
Na-edozi ngwakọta nke ebe obibi nke ụmụ ahụhụ. Echefula ogwe nche na respirator.
Ụzọ na ụzọ isi mesoo bedbugs na pests ndị ọzọ na-eri n'ọtụtụ ụzọ yiri nke ahụ, ma ha nwekwara ụfọdụ ndị ọzọ.
Anyị na-ewetara gị nlezianya nkọwa zuru ezu banyere ụzọ e si emeso mgbochi, otu esi egbu nkịta ma kpochapụ moths.
Lelee vidiyo ahụ: chinchi, ebe ha bi, otu esi achọpụta ha ma mee ka ha ghara ịdị, otú ndị mmadụ si agwọ ọrịa bụ: